Media | Abdikadir Askar
Khudbad Ku Saabsan Mihnadda Saxaafadda
10 July 2020- Khudbad kooban oo aan u jeediyey arday kulliyadda saxaafadda Jaamacadda Hargeysa oo dhamaystay waxbarashadoodii heerka koowaad.
Safarkaygii Hargeysa ilaa Dhagax Kuure
26 May 2020- Dhagax Kuure waa goob dalxiiseed taariikhi ah oo ay ku xardhan yihiin qoraalo loo malaynayo in la daabacay kumanaan sanno ka hore. Waa buuro dhagax salax ah oo si farshaxan leh isku sudhan.
Deegaanka Dhagax Kuure waxa ay hoos tagtaa degmadda Arabsiyo ee Gobolka Gabiley. Qiyaastii ilaa 50 km ayey dhinaca Waqooyi-galbeed kaga beegan tahay caasimada Hargeysa.
Digitalisation, Media and FinTech
11 May 2020: Speaking on “Digitalisation, Media and FinTech” during the #AfricanInnovationWeek held at African Union HQ
Kaalin noocee ah ayey Haweenku ku Leeyihiin Isbedelka Warbaahinta #Somaliland ?
04 May 2020: Waa hadal kooban oo aan u jeediyey xubno haweenka warbaahinta Somaliland ka hawlgala, oo markii koowaad samaystay ha’yad war-tabineed oo gabadh muwaadinad ah hoggaaminayso, looguna magac daray CARRO-EDEG
Somaliland Governance Sector Forum
30th June 2019– Participated in a panel discussion on ‘#Democratization and #Decentralization” at #Somaliland Governance Sector Forum 2nd Quarter Meeting held at Maansoor Hotel.
My Presentation on Windrush Generation
Aug 2018: I was tasked, as a part of class discussions at the University of York, to deliver a brief talk on the arrival of ‘Windrush Generation’ and how it has contributed to Britain’s multi-cultural society.
DOODDA SLNTV: Waddaniyadda iyo Dhallinyaradda
Apr 4, 2017-Waa dood iyo falanqayn aan ku iftiiminayno heerka ay waddaniyadu ka taagan tahay dhallinyaradda JSL. Dooddu waxa ay si qoto dheer u faalaynaysaa xidhiidhka ka dhexeeya wadaniyadda iyo dhallinyaradda.Gebogebadda waxa lagu soo af-meerayaa talooyin dhaxal gal ah oo lagu gubaabinayo in dhallinyarata JSL u tafaxaytaan daryeelka iyo qiimaynta waddaniyadda.
FALANQAYNTA SIYAASADDA: Waraysi aan siiyey Star TV
Sep 12, 2015- Waa waraysi gaar ah oo ay ila-yeelatay muuq-baahiyaha Star TV. Waxa aan waraysiga kaga fal-celinayaa dareenkayga siyaasiga ah ee la xidhiidha hannaanka dimquraadiyadeed ee Soomaaliland. Waxaan diirada ku saarayaa is-bedaladii dhacayey intii xisbiga tallada haya ee KULMIYE hoggaanka qabtay.